याे कस्तो माया प्रेम हाे ? | Butwal Dainik
याे कस्तो माया प्रेम हाे ?
१७४६ पटक पढिएको
प्रेम शब्द हेर्दा कति छाेटाे शब्द लाग्छ तर प्रेम गर्ने मान्छे , प्रेम मा डुब्ने मान्छे र प्रेमलाई जीवन भरी निभाउनु मान्छे मा धेरै फरक हुदाे रहेछ । कसैकाे प्रेम सफल हुन्छ त कसैकाे प्रेम असफल हुन्छ अनि कसैकाे प्रेम दाेधार अवस्था मा हुन्छ । यिनी प्रेम भित्र मेराे पनि एउटा पर्छ ।
मेराे जिन्दगी राम्रो संग चाल्दै थियो । म अाफ्नाे जीवनमा खुसी थिए तर त्यहि बीचमा कुनै साथी बाट एउटी केटीले मेराे नम्बर मागेको रहेछी तर मलाई थाहा थिएन ।
एक दिन मा सुतिरहेको बेला मेराे माेबाइल मा SMS अाउछ शुभ प्रभाव (Good Morning) भनेर म त्याे SMS काे जवाफ दिन्छु । फेरि अर्को दिन पनि अाउछ त्यो दिन पनि जवाफ दिन्छु । तेस्रो दिन पनि शुभ प्रभाव भनेर अायाे अनि जवाफ दिए । म साेध काे हजुर उता बाट जवाफ अायाे म तिम्रो साथी मलाई चिनेनाै म भने अहिले बल्ल चिने तेस्रो दिन परिचय मात्र भयो ।
धेरै दिन सम्म SMS म‌ै कुरा भयो । SMS मै कुरा गर्दागर्दै राति १० बजेया शुभ रात्री भनेर माेबाइल राखेर सुत्न लागेको थिए अनि फाेन अायाे अनि कुरा गरे मलाई मन भित्र भित्र डर थियो ।
अब विस्तारै विस्तारै फाेन मा कुरा हुन थाल्यो । कुरा हुदाहुदै ४/५ पटक भेट पनि भयो हाम्रो त्यति समयसम्म केहि थिएन । मेरा परिक्षा नजिक अाउदै थियो । परिक्षा काे तयारी गर्दै थए त्यो बीच मा राति सुत्ने बेलामा फाेन अाउ थियो हामी राति २/३/१ बजे सम्म फाेन संवाद हुन् थियो ।
कुरा गर्दागर्दै म उसलाई प्रेम गर्न थाले । याे कुरा मलाई थाहा थियो तर म भनेन कि म तिमीलाई गर्छु । प्रेम दुई प्रकार काे हुदाे रहेछ एउटा शरिरिक प्रेम र अर्को अत्म प्रेम म उसलाई अत्म मुटु देखि माया गर्थें ।
कहिले कहि हामी दुई जना मा झगडा पनि हुन्थ्यो तर पछि फेरि दुवै जना बाेल थिए। हामी म उसलाई कहिले संका गरिन तर उ मेराे माथि संका उपसंका गर थिन ।
एक दिन काे कुरा हाे फाेन गरिन मेराे म बहिरा थिए अनि केही बेरमा काेठा मा पुगे अनि म फाेन गरे फाेन उठेन ४/५ पटक गरे अनि राति मा फेरि फाेन अायाे कुरा भयो ।
म एउटा गरिब दलित परिवार मा जन्म लिएको र उनी सम्पन्न परिवार मा जन्मे कि महिले कहि भन्थे कि कहाँ हुन्छ गरिब र धनी काे मिल्न ।
मन मन मा दुवै जना काे मन माया प्रेम काे कुरा खेल थिइए तर बहिरा व्यक्त गर्ने अाट कसैमा थिएन । हामी दुवै जना एक मिलन सार साथी बनेर कुरा हुँदै गयो । म माया गर्थें अनि उनी काे ले गर्ने माया मा फरक धेरै पाए ।
धेरै दिन भयो हामी दुवै काे कुरा नभएको अचानक एक दिन फाेन अाउछ भन् थिन कि मेराे बिहे हुन लागेको छ । म त्यो दिन मेराे जीवन काे सबैभन्दा बढी दुख भएको दिन थियो । म भने बधाई छ बिबाह काे तिमीलाई तर मेराे मन मा खेलेको कुरा कसरी व्यक्त गर्म । अन्तिम मा उसलाई पनि थाहा भयो मैले माया गरेकाे तर उसले घरपरिवार काे कुरा मानसम्मान काे लागि विवाह गरिन ।
त्याे दिन बाट एक प्रकार काे मेराे मृत्यु नै भइसकेको थियो । मृत्यु दुई प्रकार काे हुन्छ एउटा प्रकृति मृत्यु र अर्को कृतिम मृत्यु मेराे कृतिम बाट मेराे मृत्यु भइसकेको र मान्छेहरु लाई देखाउन काे लागि बहिरा हास्ने गर्छु ।
मेरा मन मा कति पीडा छ त्याे कसरी र कहाँ व्यक्त गर्न मिल्छ । उन काे बिहे भए पछि उनी मेराे सम्पर्क मा अहिलेसम्म आए कि छैनौं ।
मलाई बहिरा बाट हेर्दा धेरै खुसी हेर्छन साथीहरू हेर्छन् मलाई तर भित्र मन काे कसलाई थाहा छ । किन कि मन भित्र कति धेरै पिडा हरु लुकेर बसेका छन । अब त्याे सबै कुरा व्यक्त गरेर के हुन्छ । त्यहि भएर म पनि बहिरा काे रुपा बाट खुसी छु ।
जिन्दगी साेचे जस्तो रहेको छैन जुन कुरा साेच्छाै त्यस काे विपरीत हुन्छ । राम्रो साेच छाै तर नराम्रो भइहाल्छ । यस्तै भएको छ मेराे जिन्दगीमा अाफु ले चाहे जस्तो हुदैनन् जीवन ।
म उनलाई यहि लेख बाट उनलाई धन्यवाद दिदैछु जे गरेकाे छाै तिमी राम्रो गरेको छाै । तिमी अाफ्ने परिवार र अामाबुबा काे मान सम्मान काे लागि माया काे हत्या गरेको छाै ।